किन जान्छ भूकम्प ? ज्योतिष दीपक सुवेदीको तर्क (भिडियो पनि)
April 25, 2019 2:12 pm
Share : 382
काठमाडौं । २०७२ बैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकमा केन्द्र बनाएर विनाशकारी भूकम्प गयो । करिब नौ हजार मानिसले ज्यान गुमाए । त्यसको दोब्बर अंगभंंग भए । कतिले अझै भूकम्पको पीडा खेपिरहेका छौँ ।
यो विपत्ति नेपालीले खेपेको आज चार वर्ष पूरा भएको छ । भूकम्पका पराकम्पन तथा साना स्केलको भूकम्प हिजोआज पनि बेलाबेलामा महसूस् भइनै रहेका छन् । बुधबार साढे ६ बजे बिहानमात्रै काठमाडौं हल्लाउने गरी भूकम्प गएको थियो ।
यद्यपि ०७२ सालभन्दा पहिला पनि सानाठूला स्केलका भूकम्प जाने गर्थे । तर ०७२ पछि भने भूकम्पलाई लिएर मान्छेको मनोविज्ञान नै फरक भएको छ । भूकम्पको चर्चा हुने गरेको छ ।
भूकम्प किन जान्छ ? धेरैका धेरै तर्क छन् । यद्यपि भूकम्प कहिले, कसरी जान्छ ? कुनै विज्ञानले ठम्याउन सकेको छैन । र पनि जिज्ञासा स्वभाविक हुनेगर्छन । ज्योतिषहरुले हिंसा, अत्याचार जस्ता अमानवीय कार्यले भूकम्पलाई निम्त्याउँछ भन्ने गरेका छन् । ज्योतिष दीपक सुवेदी पनि त्यही तर्क अघि सार्छन । उनको भूकम्पबारेको भिडियोः